७८ वर्षका वृद्धले १७ वर्षकी किशोरीसँग बिहे गरे, बिहेको २२ दिनमै किन गर्नुपर्‍यो डिभोर्स ? – नेपाली सूर्य
November 17, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on ७८ वर्षका वृद्धले १७ वर्षकी किशोरीसँग बिहे गरे, बिहेको २२ दिनमै किन गर्नुपर्‍यो डिभोर्स ?
उनहिरुको बेहेको बेला नोनी पहिले नै गर्भवती भएको चर्चा चलेको थियो । तर नोनीकी दिदी इयानले भने यो खबर सत्य नभएको भन्दै खण्डन गरेकी छिन् । विवाहको क्रममा अबाहले नोनीलाई निकै ठूलो परिमाणमा उपहार समेत दिएका थिए जसले धेरैको ध्यान तानेको थियो । तर, अचानक उनहिरुले सम्बनधविच्छेद गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो भन्ने प्रस्ट हुन सकेको छैन । कालापानी पोस्ट
पाठेघरको सफाई गर्ने क्रममा अन्द्रामा कैंची लगाएपछि गायत्री देबीको अकालमै ज्यान गयाे